Sacuudi Carabiya oo yabooh xabad-joojin u sameysay Xuutiyiinta. | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Sacuudi Carabiya oo yabooh xabad-joojin u sameysay Xuutiyiinta.
Sacuudi Carabiya oo yabooh xabad-joojin u sameysay Xuutiyiinta.
“Wixiii xilligan ka dambeeya Xuutiyiinta ayay u taal inay danahooda hormariyaan ama kawa Iran” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibada Sucuudiga Amin Faysal Bin Farhan Al-Saud oo u warramayay warbaahinta.
“Xal ama dadaal kasta oo aan qireyn in Yemen si gardarro ah loogu soo weeraray milatari iyo in cunaqabateyn lagu hayay lixdii sano ee la soo dhaafay, taas oo sababtay dhibaatooyin bini’aadaminimo waa mid dhalanteed ah ” ayuu afhayeenka Xuutiyiinta Mohammed Abdulsalam ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.